Tantaran'ny El Filibusterismo - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
Tantaran'ny El Filibusterismo
Maro ny fanafihana sy fandrahonana eken'ny Rizal
Alohan'ny handehanako indray ny tanàna Jose Rizal ao oktobra, dia maro ny loza niaritra ny havany sy ny namany noho ny fanoratana ny Noli Ahy Tangere
Teo amin'ny faha-yao ny fijaliana ihany koa ny olana eo amin'ny tany ny tantsaha ny Calamba.
Izany dia nitondra ny Rizal mikatsaka ihany koa ny manampy ny fakàna am-bavany noho ny olana teo amin'ny tany, napasabay mbola nandre ny raharaha Navoaka momba ny fananana ny antsoina hoe"poizina"ny famakiana Noli Ahy Tangere. Nanomboka Rizal sy ny ny tantara El Filibusterismo eo anoloan'ny an io traikefa io. Hitondra vokany eo aminy kaipala ny fanaintainana izay nijaly izy sy ny fianakaviany. Na dia misy vinavina tsotsotra fa mayplanosi Rizal fanindroany tantara, isan-karazany izany ny zava-mitranga mahakasika azy ireo hiverina any an-tanindrazany. Mivantana sy an-kolaka, fiantraikany tsy latsaky ny enim-bolana pagkamalas azy ny ratsy manao ny mpisorona, toy ny"ny fanangonan-karena ny manor, ny filalaovana fitia niaraka tamin'ny tovovavy, messing, pagliligpiy fahavalo sns."Dia nandao an'i Rizal Filipina tamin'ny febroary noho ny tahotra izy no imperil ny fiainan'ireo olon-tiantsika. Mampatahotra taratasy fandrahonana fa tena efa tsy misy sonia tonga ary nanoro hevitra ny governora fa izy niverina ho any amin'ny hafa firenena. Vokatra Rizal ao amin'ny taratasy nalefany ho Blumetritt mandritra ny diany."Rehetra ny lehiben'ny faritany sy ny arseveka dia ho avy ny Governora Jeneraly ny andro anio mba izaho no ipagsumbong. Ny rehetra mpandraharaha ny Francesco, dia hanoratra ny mifanditra amin'ny ben'ny tanàna fa nahita ahy ny zava-miafina nakikipagpulong amin'ny tovovavy sy ny tovolahy teo an-tampon ny tendrombohitra. Marina aho dia mandeha any an-tendrombohitra raha ny moske miaraka amin'ny lehilahy, ny vehivavy ary ny ankizy mba hiaina ny hangatsiaka sy hanorana maraina fa dia ahitana hatrany ny lietnà ny mpiambina sivily mahafehy ny managalog. Nanatitra ahy ny vola aho mpiray tanindrazana aminy noho ny nandaozany ny nosy. Nanontany izy ireo fa ireo zavatra ireo dia tsy afa-tsy ny fifanampiana fa azy ireo tsara satria efa maro ireo namana sy mifandray fa ho sesitany aho Balabag na ny Marianas.
Satria na dia eto amin'ny kely ny aretina, dia faingana nanao veloma ny fianakaviako."Tsy nifarana tao amin'ny famoahana ny rivotra olana. Mananika ny tranga teo amin'ny kianja ny Mercado-Rizal mandra-ny Fitsarana Tampony ao Espaina.
Ny fianakaviana no nampijalian ny be dia be ny herisetra
Maro ny havany izy maty sy enjehina. Nisy nitsipaka mapalibinng tao am-pasana Katolika. Eo afovoan 'ny fiahiahiana, dia nijaly tamin' dia satria ny tena manokana sy ara-politika ny toe-javatra izy malahelo ny Leonor Rivera, ary toa tsy liana amin ny insipirasyong vokatry ny paniningalang-akanim-borona miaraka amin'ny Nellie Boustead izy mamaly ny kabi-anisan'izany ny tuligsang tinatamo Noli Ahy Tangere very azy roa namana sy ambany pagkikilalang nanome azy tafiditra ao amin'ny Hetsika Fampielezan-kevitra. Ankoatra izay nijaly noho ny olana eo amin'ny ara-bola. Naisiwalat ny taona, ny zava-tsarotra ao anatin'ny taratasy iray nalefa ho Jose Maria Lena:"izaho no reraka ny finoana ao amin'ny firenena. Lazaina fa niray izy ireo mba ho mangidy ny fiainana manakana ireo ny hiverina, ny fampanantenana ny hanome ahy ny famatsiana ireo, ary rehefa afaka izany, atao ao anatin'ny iray volana, dia manadino indray aho.
Naisanla manana ny firavaka, dia miaina ao anatin'ny cheap efitra, dia hihinana eo amin'ny tsy mahazatra ny trano fisakafoanana mba ankafizo ary namoaka ny boky.
Tsy taty aoriana hoe, hijanona aho raha tsy misy dia tonga ny vola. Wow, hilaza aminao aho raha tsy ianao ihany, raha tsy mino aho misy tsara hafa tsy ny Filipiana, te hitondra ny firenena ary ny demonia."Soa ihany, rehefa rehetra dia ny fanantenana ny, tonga ny tsy nampoizina ny fanampian'ny Valentin Ventura avy any Paris. Izy no nandefa ny fitambaran'ny fandaniana ho fanontana ny boky rehefa avy nandre ny mila Rizal ao vola. Vita avy amin'ny boky tamin'ny septambra saGhent, Belzika. Velona ny tantara momba ny fahatsiarovana ny mpisorona (Gomez, BurgosatZamora. Ny fanatitra izany amin'ny bhoodan hetsika faharoa tantara no antony fototra mahatonga izany dia heverina ho ny tantara ara-politika. Ankehitriny eto amin'ny malatalaarawang fitantarana ny olana amin'ny rafitra governemanta sy ny mpikambana ao olana: ny olana eo amin'ny tany, fitantanana, fomba fanao ara-pivavahana, ary ny fampianarana, ny kolikoly, sns. Mivantana sy ankolaka ihany koa, hita taratra amin'ny traikefa mangidy gumiyagis ny mahita ao amin'ny sehatra sasantsasany sy ny dingana ny tantara. Feno malagasy sakafo maraina, ary afaka hitoe-jaza ny fivoaran'ny Mandeha avy ny Famoahana ny Daty, na dia tsy azo ihodivirana ny tsy manaiky ny mangidy sy ny tsy fahombiazana amin'ny fomba tsy ho diso - fa toy ny bereavement sy ny fanantenana amin'ny fitiavana.
Ny tantara El Filibusterismo (ara-bakiteny"Ny Filibuster") na Ny fitondran 'ny fitiavam-bola no faharoa tantara nosoratan' ny firenena mahery fo any Filipina i José Rizal, izay izy amin'ny fo manontolo nanolotra ny bhoodan hetsika izay miha-fantatra ao amin'ny teny filamatra ao amin'ny Facebook na Gomez, Burgos, ary Zamora.
Izany dia ny fitohizan'ny na ny tohiny ny Noli Ahy Tangere ary toy ny any Etazonia, nijaly Rizal olana raha nanoratra izany, ary toy izany koa, ny mpanoratra amin'ny teny espaniola. Nanomboka ny asa tamin'ny volana oktobra raha mampihatra ny fitsaboana ao Calamba. Tany Londres, tamin'ny taona, dia nanao fiovana maro ny tetika sy nohatsaraina izy vitsivitsy toko. Nanohy Rizal ny miara-miasa amin'ny sora-tanana raha monina ao Paris, Madrid, sy Brioksela, ary efa nahavita izany tamin'ny Martsa, ao Biarritz. Namoaka izany taona izany ihany, ao Gent. Ny atao hoe Valentin Ventura fa ny iray tamin'ireo namany nampindrana ny vola ho azy ny fanontam-pirinty sy navoaka araka ny tokony ho izy ny boky ny septambra. Toy izany ny tantara dia ara-politika izay mameno, milaza sy nagpapagising kokoa, indrindra amin'ny faniriana mafy mba makapagtamo ny tena fahafahana sy ny zon ny tanàna. Jaona Emmanuel E BernardinoContributor, ny namaky aho, dia nianatra isika dia tsy maintsy miaro ny mpiray tanindrazana avy ny mpamono olona raha notevatevaina izy ireo dia manana antsika isika toy ny nataon ny teny espaniola ao amin'ny firenena. Nahita aho fa ny mihoatra"ny lalana dia ny mahery fo, Dr.
Jose Rizal mialoha nanao ny boky faharoa El Filibusterismo.
Manaitra tokoa ny fandinihana ny tantaram-piainany, ny nataony sy ny zava-bita ny Dr.
Jose Rizal satria misy be dia be mba hianatra aminy. Ao ny namaky aho, dia nianatra isika dia tsy maintsy miaro ny mpiray tanindrazana avy ny mpamono olona raha notevatevaina izy ireo dia manana antsika isika toy ny nataon ny teny espaniola ao amin'ny firenena. Nahita aho fa ny mihoatra"ny lalana dia ny mahery fo, Dr. Jose Rizal mialoha nanao ny faharoa boky El Filibusterismo. Manaitra tokoa ny fandinihana ny tantaram-piainany, ny nataony sy ny zava-bita ny Dr. Jose Rizal satria misy be dia be mba hianatra aminy. Jaona Emmanuel E Bernardino mpandray Anjara, izay midika fa ny olo-malaza mpanoratra. Nijaly izy ireo dia nanoratra ny tantara roa NOLI AHY TANGERE sy EL FILIBUSTERISMO. Misaotra amin'ny fanazavana manan-danja ao amin'ny tantara.
Hitahy pa po enga anie ianao Andriamanitra araka ny tokony ho izy ka tsy tokony ho matin sion na dia lehilahy iray apetraka fotsiny ny anaranao izy pesos.
satria angamba ny rehetra ny habetsaky ny tena zava-dehibe ny etazonia satria tsy niteraka iray tapitrisa raha toa ka tsy misy usa toy izany koa any amerika raha tsy nisy rizal dia tsy niteraka ary fantatra ihany koa amin'ny firenena ao filipina. Tanteraka ny afa-po raha tena maro typographical fahadisoana toy izany fa tsy loatra maintindhan yung teny hafa rizal dia iray amin'ireo iniidulo ny ivanna aingam-panahy toy izany, tsy izany ny manoratra ny tantara sy ny tantara fohy. Ao ny namaky aho, dia nianatra isika dia tsy maintsy miaro ny mpiray tanindrazana avy ny mpamono olona raha notevatevaina izy ireo dia manana antsika isika toy ny nataon ny teny espaniola ao amin'ny firenena. Nahita aho fa ny mihoatra"ny lalana dia ny mahery fo, Dr. Jose Rizal mialoha nanao ny faharoa boky El Filibusterismo. Manaitra tokoa ny fandinihana ny tantaram-piainany, ny nataony sy ny zava-bita ny Dr. Jose Rizal satria misy be dia be mba hianatra aminy.
Некои странски државјани, одлучил да се пензионира во Филипини